Raadinta midabyo ka macquulsan kan Pantone? Suura gal maaha | Abuurista khadka tooska ah
In dunida naqshad sawireed midabku waa mid ka mid ah alaabta ceeriin ee ugu muhiimsan, waa inaan ogow isticmaalkiisa iyo qalabkiisa caalamiyeyn badan si ay ula awoodaan inay la shaqeeyaan iyaga oo aan lagu khiyaanayn shaashadda.
Ugu horreyntii waa muhiim in la ogaado waxa uu yahay nidaamka Pantone ama Nidaamka Iswaafajinta Pantone (PMS) waa nidaam oggol aqoonso midabada daabacaadda iyadoo la adeegsanayo lambar gaar ah. Erayada fudud, waa midab u dhigma midab, taas oo si weyn u fududeysa shaqada naqshadeeyayaasha garaafka.
Waxbadan ka baro Pantone
Waxa shirkadda Pantone soo saarto ayaa ah warqado caan ah oo kaararka-kartoonada ah oo ah culeys gaar ah iyo cufnaan leh daabacaadda muunad midab ah, magaceeda iyo qaaciidooyinka lagu helo. Laakiin maxay sidaas u yihiin ku habboon naqshadeeyaha garaafka?
Waxaa jira sababo badan, laakiin midka loo qaadan karo kan ugu muhiimsan ayaa ah in hagayaashani ay kuu oggolaanayaan, iyadoo aan loo eegin nidaamka qalliinka, kormeeraha ama tifaftiraha sawirka aad u isticmaasho midabka wax soo saar ee daabacan waa sax. Fadlan ogow in shaashadaha ay muujinayaan midabada qaabka RGB taasina waxay marin habaabin kartaa marar badan, laakiin adoo adeegsanaya Pantones waxaan hubin karnaa inuu daabacaadu horay ujirtay Plotter, Offset ama Digital Ofsset had iyo jeer waa sax.
Pantones wuxuu shaqeeyaa wixii ka baxsan CYMK, oo ah nooc midab jajab ah. Qaabkan 32-bit wuxuu ku tiirsan yahay isku darka cyan, magenta, huruud, iyo midabbada madow si loo abuuro inta ka hartay midabka midabka. Qaabkan waxay ku saleysan tahay nuugista iftiin. Midabka ay shey u taagan tahay wuxuu u dhigmaa qeybta iftiinka ee ku dhaca shayga isla markaana uusan u dhuuqayaan.
Laakiin adduunka daabacaadda ayaa ku ballaadhay hal-abuurnimada Muuqaalka Sawirada, midabada isticmaala midabbo gaar ah oo ka baxsan waxa isku dhafan ee Cyan, Magenta, Jaale iyo Madow soo saari karaan, sida wuxuu noqon karaa mid bir ah ama mid dhalaalaya loo adeegsado badanaa adduunka naqshadeynta garaafka.
Dhinaca kale midabka dhabta ah ama RGB, waa qaab midab ku saleysan iskudhiska lagu daro ee leh kaas waxay u oggolaaneysaa inay matalaan midab adoo isku daraya iskugeyn (wadarta) saddexda midab ee iftiinka aasaasiga ah (casaan, cagaar iyo buluug). Moodelkan laftiisu ma qeexayo waxa saxda midabyadan loola jeedo, sidaas darteed isla qiimaha RGB ayaa soo bandhigi kara midabbo aad u kala duwan waxay kuxirantahay aaladda isticmaasha tusaalahan midabka ah, iyo xitaa adeegsiga isla tusaalaha, meelaha midabkiisa way kala duwanaan kartaa. Mid ka mid ah sababaha naqshadeynta garaafka ayaa qaata tilmaamaha Pantone shaqooyinkooda.
Hadda oo aad ogtahay kala duwanaanshaha, la shaqeynta hal qaab ama mid kale ayaa adiga kugu habboon.
Sawirka Lead: Designer.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waraaqaha midabaynta » Midabka dhabta ah ama Pantone? Ogow kala duwanaanshaha
Juan | astaamo bilaash ah dijo
Markii la isu keenayo isku-darka midabka wareegga labaad ee daabacaadda shaashadda, waxaan doortay midabyadayda anigoo isticmaalaya palette-ga aasaasiga ah ee CMYK ee ku jira Adobe Illustrator. Waxaan isku dayay inaan aad uga taxadaro markan u dirayo qiimaha CMYK iyo xeerarka Hexidecimal ee midabada sidaa darteed waxaan taabtay saldhigyada oo dhan. Laakiin markii aan u diray sawirrada iyo midabada daabacaha, natiijooyinka sax ma ahan in la sheego. Waxaan ku weydiinayaa nooca daabacaadda ayaa ah tan ugu badan ee lagu taliyo si loo helo awooda midabka midabka aan doonayo?
Jawaab Juan | astaamo bilaash ah
Milton Glaser iyo astaantii caanka ku noqotay, ee “I? NY "